မုနျး…မမသေ့၍ – My Blog
အဖှားနဲ့အနျတီလေးရဲ့ အစီစဉျကွောငျ့ အဖှားတို့အိမျအောကျထပျမှာပဲ စတညျးခလြိုကျတယျ…။ “သား ရသရေ” အိမျငှါး ကောငျမလေးရောကျလာရငျတော့ ငါ့မွေးအပျေါထပျပွောငျးရမယျဆိုတဲ့ စကားခံကွောငျ့ အိပျယာလောကျသာ အောကျထပျမှာ ပွငျဆငျပွီး ဘာသငျတနျးတကျရငျကောငျးမလဲ တှေးကွညျ့တော့ အနျတီလေးကသူ့သူငယျခငျြး ကှနျပြူတာ (ဂရကျဖဈ) သငျတနျးဖှငျ့ထားတယျ။ အဲ့မှာလိုကျအပျပေးမယျလို့ ပွောလာတော့ ကနြျောလညျးစဉျစားမနတေော့ပဲ ခေါငျးညိတျလိုကျရတယျ။ အဈကိုဝမျးကှဲနဲ့ သငျတနျးတူစတကျတဲ့နမှေ့ာ ကနြေျာ့ကမ်ဘာကို ဖကျြစီးမယျ့၊ကနြေျာ့ကို နယျပယျတဈခုထဲရောကျအောငျဆှဲသှငျး ပဈခဲ့တဲ့ “စုစုမောငျ”ဆိုတဲ့ မိနျးမရိုငျးကွီးကို စတငျဆုံစညျးခှငျ့ရခဲ့တယျ….။ “(ကွညျနူးဖှယျရာ အတိတျ (သို့မဟုတျ)မာယာမြားနဲ့ကခုနျခွငျး” သွရှခြိုသာသော အသံတဈခုက နားစညျထဲသို့ ပဲ့တငျဝငျလာတာကွောငျ့ ခေါငျးမော့ အကွညျ့မှာ…… “မင်ျဂလာပါ ” မမက မငျးတို့ကို ဂရကျဖဈ ပိုငျးနဲ့ပကျသကျပွီး အခွခေံကစသငျပေးမှာပါ..။မမနာမညျက “စုစုမောငျ”လို့ချေါတယျ…။
အကွညျ့တှကေို ထိုမမဆီသို့ ရှလေို့ကျခြိနျမှာတော့ မွငျ့မာတဲ့အရပျနဲ့လိုကျဖကျတဲ့ ကောကျကွောငျး အလုံးအဝနျးအဖုအထဈတှနေဲ့ နုနုယျပြိုပဈြတဲ့မကျြနှာလေးကို မှငျသကျငေးမောလိုကျမိတယျ။ “အိုး လှခကျြ„…(ကနြေျာ့အရမျး ကွိုကျတဲ့ လုလုအောငျ အစပျအပေါကျမြိုး) တံတှေးကို ဂလုခနဲမွိုခလြိုကျပွီး…တပွိုငျတညျးမှာ ဖွဈပျေါလာတဲ့ တပျမကျခွငျးနဲ့ရာဂ မီးတှကွေောငျ့ အောကျက ကိုရှပေနျးက ဖွောငျးခနဲ အမောကျထောငျလာတယျ…။ တတှတျတှတျရှငျးပွနတေဲ့ သငျတနျးစာကို စိတျမဝငျစားပဲ မမရဲ့ရူမငွီးတဲ့ အလှကိုခေါငျးစခွဖြေား မကျြတောငျခတျတမျးရူစားနတေော့ ဘေးက နောငျတျောဝမျးကှဲက “အမောငျရသ” ရှစေိတျတျောထိနျးပါလို့ ခနဲ့တဲ့တဲ့ကွောငျ့ မကျြလှာခပြွီး စာဘကျကို အာရုံပွနျစိုကျလာရတယျ…။ “ဖူးစာ ဟူသညျ နဖူးမှာစာမကပျထားသလို..ဦးရာလူပါ စနဈလညျးမဟုတျတာကွောငျ့„ကနြျောနဲ့မမကို သံသရာစကျဝိုငျးက နောကျတဈကြော့ပွနျအပတျမှာ ဆုံခှငျ့ ပေးလိုကျပုံက….။
အပျေါ ထပျတကျကာ အဝတျစားလဲပွီး မမနဲ့ရုပျရှငျရုံထဲကအကွောငျးကို ပွနျစဉျးစားရငျး အောကျက ညီတျောမောငျ ခေါငျးထောငျလာတော့…ဖွေးဖွေးလေးပှတျသပျပေးကာ…ရှတေို့းနောကျငငျ လုပျပေးလိုကျတယျ….။ “အငျးး…ဟငျး”အံလေးကွိတျကာ လကျတှကေို ညီတျောမောငျဆီ ပှတျသပျပေးရငျး….။ “ဖပျြ…ဖပျြ…” ဟာ မီးပကျြသှားပွီ။ မမရေ ဖယောငျးတိုငျ ဝယျပွီးသားရှိရဲ့လား?ကနြေျာ့မှာ အပိုရှိတယျ မမ..ယူမလားဗြ။ အေး အဲ့တာဆိုရငျ..ယူခဲ့ပေးအုံးကှာ..မမအောကျထပျမှာ မှောငျမဲနပွေီ…။ ဖယောငျးတိုငျယူ အောကျထပျဆငျးကာ မမခနျးဆီသို့ ဝငျလိုကျတယျ….။မီးခွဈ ခွဈကာ ဖယောငျးတိုငျးကို မီးညှိလိုကျခြိနျမှာတော့ အဝတျစားလဲရငျး မီးပကျြသှားတုနျး ရငျလြားလေးနဲ့ ဖွဈနတေဲ့ မမကို တှလေို့ကျခြိနျမှာတော့…….။ ဘယျလိုမှ ထိနျးသိမျးမရတော့တဲ့ အခဈြရလေငျြတှကေို မမပျေါကို စီးဆငျးခှငျ့ပေးလိုကျပါတော့တယျ… မတျတပျလေးရပျနတေဲ့ မမကိုယျလေးကို နံရံဆီတှဲ မှီပီး နှုတျခမျးအစုံကို နမျးယူစုပျငငျလိုကျတယျ…။
မမကိုယျလေးကို ပှယေူ့ပွီး အိပျယာပျေါတငျကာ မမပေါငျကွားထဲ တိုးဝှေးရငျး ရနျစနတေဲ့ အစိလေးကို နှုတျခမျးနဲ့ဖိကိုကျပွီး ခပျဆတျဆတျလေးခါပေးလိုကျတော့……အိုး..အခဈြရာ,.မမရူးလိမျ့မယျတဲ့…။ ခါးလေးခှပွေီး ကနြေျာ့ပါးပွငျကို ပှတျသပျရငျး ဘုနျးနိမျ့မှာ မကွောကျဘူးလားတဲ့….။ဟငျ့အငျးးအဲ့အယူတှေ ကနြေျာ့မှာမရှိပါဘူး မမ…မမကို ခဈြတာ ရှုံးခွငျးမွတျခွငျး ဘုနျးနိမျ့ခွငျးစတာတှေ ဘာမှမရှိပါဘူးဗြာ..။ “မောငျရယျ ခဈြတတျလိုကျတာကှာ”လို့ တီတာလေးပွောပွီး သူမပေါငျလေးတှကေို ဟပေးလာတော့ ကနြျောလညျး မရဲ့ပိလေးကို အသာလေးဖွဲယူကာ အတှငျးသားရဲရဲလေးတှကေို လြှာဖြားလေးနဲ့ ခပျပွငျးပွငျးလေး လကျြပေးလိုကျတယျ။မမပိပိက ဝတျရညျလေးတှေ လြှံကလြာတော့ နှုတျခမျးတှကေို ခှာလိုကျပွီး ညာလကျခလယျလေးနဲ့ အကှဲကွောငျးလေးကို ထိုးမွုပျလိုကျတော့ တငျးခံနတေဲ့ အရာတဈခုကွောငျ့…..မမမကျြနှာလေးကို မွတျတနိုးကွညျ့ရငျး မမရဲ့အပြိုရညျလေးကို ယူငငျဖို့ ကနြျော ခြီတုံခတြုံဖဈသှားရတယျ…။ မမကတော့ နားလညျသညျ့အလား မမရဲ့ အပြိုရညျကို မောငျ့ကိုပဲ ပေးပါရစလေို့ တိုးလေးကပျပွောလာတော့…အတှကေို့ မရှောငျနိုငျတော့ပဲ မမပိပိလေးနဲ့မကျြနှာပွငျကို နောကျတဈကွိမျဆငျးသကျခှငျ့ပေးလိုကျတော့တယျ…..။
အဲ့ရကျကနစေပွီး ကနြျောနဲ့မမဆကျသှယျပွတျသှားလိုကျတာ…သငျတနျးကနတေဈဆငျ့ မမဖုနျးကိုရတော့…နောကျဆုံးတှခှေ့ငျ့လေးပေးပါဆိုပွီး တောငျးဆိုလိုကျတယျ…….။ အတိတျအကွောငျးကို ပွနျတှေးရငျးမကျြရညျစတှကေို ဖယျရှားရငျး ရနျကုနျ-ပွညျလမျး တဈဖကျခွမျးရှိကားဂိတျကို ကူးဖို့ ဖွတျလိုကျစဉျမှာတော့………။ “ဟေ့ ကောငျလေး…ညီလေးရေ ရှမှေ့ာကား…မကူးနဲ့ရပျနေ……။ ဟာ…..သူမကွားတာလား? “ကြှီ…..ဒုနျးးးး” ကနြျော ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံး လထေဲမှာ အခိုကျအတနျ့တော့ လှငျ့ပါသှားပါတော့တယျ…အဲ့နောကျမှာတော့ ပတျဝနျးကငျြတဈခုလုံး အမှောငျထု ဖုံးသှားပွီး…ကနြေျာ့ နှုတျခမျးဝဆီမှ အမညျနာမတဈခုကို တမျးတလိုကျမိတယျ….။ “မမရယျ” ဟာ…ဟိုမှာကောငျလေးတဈယောကျကို ကားတိုကျသှားပွီဟေ့…။လူတှဝေိုငျးအုံပွီး ကားတိုကျခံရတဲ့ ကောငျလေးနား ရောကျလာ ခြိနျမှာတော့…….။ သှေးစသှေးနတှနေဲ့ အသကျမဲ့သှားရှာပွီဖွဈတဲ့……..။ ပွီးပါပွီ
“ဖြန်းးး!!!”လွှတ်စမ်း..ရသ နင်ငါ့ကို ခု လွှတ်…… ထူပူသွားတဲ့ ဘယ်ဘက်ပါးကြောင့် မမနဲ့ လူချင်းခွာပြီး ကျနော်အမြတ်တနိုးကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ မျက်နှာလေးကို ငေးရင်း…..။ နင် ငါ့ကို ဒီနေရာကို ချိန်းတာ ငါ့ကိုဖက်ပြီး ငါ့နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းဖို့လား?နင့်ရဲ့ အရေးတကြီး ကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာ ဒါလားးးး? “မဟုတ်ဘူး မမ” မမနဲ့သန့်စင်ဆိုတဲ့ ဘီးကြဲ လက်ထပ်ဖို့တစ်ပတ်အလိုမှာ ကျနော့်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးချစ်ခဲ့ရတဲ့ မမကို ခနတဖြုတ်အဖြစ်တွေ့ခွင့်မရှိတော့ ဘူးလား? “ပြောစမ်းပါအုံး ဒေါ်စုစုမောင်” ငြိတွယ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သံယောဇဉ် တွေက သဲထဲရေသွန် ဖြစ်ကုန်တာလား၊အသွေးအသားတွေပုံအောပြီး ချစ်ခဲ့ရတာတွေက တိမ်ပေါ် အရုပ်ရေးသလိုလား? “ခင်ဗျား ဗျာ”ရက်စက်လွန်းမနေဘူးလား? စကားလုံးတွေကို နှုတ်ခမ်းဝမှ တရစပ်ဖွင့်ဟရင်း ကျနော့်ပါးပြင်ထက်ဆီမှာ မျက်ရည်တွေ စကျလာပြန်တယ်….။
“နေရာကား အထင်ကရနယ်မြေ အင်းလျားကန်ဘောင်” ထိုကန်ဘောင်ထက်မှာ အင်းလျားရေပြင်ကိုဘေးခိုင်းပြီး မျက်ရည်စတွေနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်နေတဲ့ “ရသနဲ့စုစုမောင်” လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်ခန့်က ဒီရက်ဒီနေရာမှာတွေ့ဖို့ မမကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ခွင့်တောင်းခဲ့တာ….။ နှစ်ယောက်သားကြား တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အခြေနေကို ကျနော်ကပဲ ပြန်လည်စတင်လိုက်တယ်….။ “မမဘက်က ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင် ကျနော်ပြန်တော့မယ်”။ကျောက်ဆစ်ရုပ်တစ်ရုပ်ပမာ ရပ်နေနိုင်တဲ့ စိမ်းကားနိုင်သူကြီးကို ကျောခိုင်းပြီး ခြေလှမ်းတွေကို ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း ဟိုဘက်ခြမ်းရှိ ဘတ်စ်ကား ဂိတ်လေးဆီသို့ ဦးတည်လိုက်တော့တယ်….။ ခြေထောက်နဲ့မြေကြီး ထိနေလားမသဲကွဲပေမယ့် ကျနော့်အတွေးတွေကတော့ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ဆီသို့….ပြေးလွှားကူးခပ်ရင်း…..။ ကျနော်တို့ မြို့လေးမှာ အဝေးသင်တက်ရင်း အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာကို မကြည့်ရက်နိုင်တဲ့ ဖခင်က “သာကေတ”မှာရှိတဲ့ အဖွားအိမ်ကနေတစ်ဆင့် သင်တန်းတစ်ခုခုတက်ဖို့ တချက်လွှတ် အမိန့်ကြောင့် အထုပ်အပိုးပြင်ရင်း ရန်ကုန်မြေကို ခြေချခွင့်ရခဲ့ပြန်တယ်။
အဖွားနဲ့အန်တီလေးရဲ့ အစီစဉ်ကြောင့် အဖွားတို့အိမ်အောက်ထပ်မှာပဲ စတည်းချလိုက်တယ်…။ “သား ရသရေ” အိမ်ငှါး ကောင်မလေးရောက်လာရင်တော့ ငါ့မြေးအပေါ်ထပ်ပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ စကားခံကြောင့် အိပ်ယာလောက်သာ အောက်ထပ်မှာ ပြင်ဆင်ပြီး ဘာသင်တန်းတက်ရင်ကောင်းမလဲ တွေးကြည့်တော့ အန်တီလေးကသူ့သူငယ်ချင်း ကွန်ပျူတာ (ဂရက်ဖစ်) သင်တန်းဖွင့်ထားတယ်။ အဲ့မှာလိုက်အပ်ပေးမယ်လို့ ပြောလာတော့ ကျနော်လည်းစဉ်စားမနေတော့ပဲ ခေါင်းညိတ်လိုက်ရတယ်။ အစ်ကိုဝမ်းကွဲနဲ့ သင်တန်းတူစတက်တဲ့နေ့မှာ ကျနော့်ကမ္ဘာကို ဖျက်စီးမယ့်၊ကျနော့်ကို နယ်ပယ်တစ်ခုထဲရောက်အောင်ဆွဲသွင်း ပစ်ခဲ့တဲ့ “စုစုမောင်”ဆိုတဲ့ မိန်းမရိုင်းကြီးကို စတင်ဆုံစည်းခွင့်ရခဲ့တယ်….။ “(ကြည်နူးဖွယ်ရာ အတိတ် (သို့မဟုတ်)မာယာများနဲ့ကခုန်ခြင်း” သြရှချိုသာသော အသံတစ်ခုက နားစည်ထဲသို့ ပဲ့တင်ဝင်လာတာကြောင့် ခေါင်းမော့ အကြည့်မှာ…… “မင်္ဂလာပါ ” မမက မင်းတို့ကို ဂရက်ဖစ် ပိုင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး အခြေခံကစသင်ပေးမှာပါ..။မမနာမည်က “စုစုမောင်”လို့ခေါ်တယ်…။
အကြည့်တွေကို ထိုမမဆီသို့ ရွေ့လိုက်ချိန်မှာတော့ မြင့်မာတဲ့အရပ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ကောက်ကြောင်း အလုံးအဝန်းအဖုအထစ်တွေနဲ့ နုနုယ်ပျိုပျစ်တဲ့မျက်နှာလေးကို မှင်သက်ငေးမောလိုက်မိတယ်။ “အိုး လှချက်„…(ကျနော့်အရမ်း ကြိုက်တဲ့ လုလုအောင် အစပ်အပေါက်မျိုး) တံတွေးကို ဂလုခနဲမြိုချလိုက်ပြီး…တပြိုင်တည်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တပ်မက်ခြင်းနဲ့ရာဂ မီးတွေကြောင့် အောက်က ကိုရွှေပန်းက ဖြောင်းခနဲ အမောက်ထောင်လာတယ်…။ တတွတ်တွတ်ရှင်းပြနေတဲ့ သင်တန်းစာကို စိတ်မဝင်စားပဲ မမရဲ့ရူမငြီးတဲ့ အလှကိုခေါင်းစခြေဖျား မျက်တောင်ခတ်တမ်းရူစားနေတော့ ဘေးက နောင်တော်ဝမ်းကွဲက “အမောင်ရသ” ရွှေစိတ်တော်ထိန်းပါလို့ ခနဲ့တဲ့တဲ့ကြောင့် မျက်လွှာချပြီး စာဘက်ကို အာရုံပြန်စိုက်လာရတယ်…။ “ဖူးစာ ဟူသည် နဖူးမှာစာမကပ်ထားသလို..ဦးရာလူပါ စနစ်လည်းမဟုတ်တာကြောင့်„ကျနော်နဲ့မမကို သံသရာစက်ဝိုင်းက နောက်တစ်ကျော့ပြန်အပတ်မှာ ဆုံခွင့် ပေးလိုက်ပုံက….။
“ရသ..မြေးရေ..ရသ” ဖွားမြေးလေး ထကွဲ့..မင်းနေတဲ့အောက်ထပ်ကို ငှါးမယ့် သမီးလေးရောက်လာပြီကွဲ့…သားနေရာရွေ့ပေးအုံး။ ကျနော်ရဲ့ ဘုံရွှေနန်းကို လုယူမယ့် ရန်သူတော် ကို မော့ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့……… “ဟာ….မမ…အဲ့မဟုတ်ပေါင် တီချာ” ကျနော့်ကို ကလေးလေးတစ်ဦးပမာကြည့်နေတဲ့ မမရဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေနဲ့ဆုံတွေ့ခိုက်မှာတော့…….. “ဝုန်း…ဘလုန်း…ဘွမ်းး” ရင်ထဲမှာ သင်္ဘောကြီး ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် ဖြတ်မောင်းသွားသလိုပါပဲလားး ဟိတ်…ဘာကြည့်နေတာလဲ ထတော့..နှုတ်ခမ်းဝတွေမှာ အာပုတ်ရည်စီးကြောင်းတွေနဲ့ကွာ…။ မမစကားကြောင့် နှုတ်ခမ်းဝကို လက်နဲ့အသာသုတ်ရင်း အိပ်ယာသိမ်းကာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ မျက်နှာသစ်ဖို့ ထွက်လာလိုက်တော့ တယ်…..။ “အို အသင်လောကကြီး”မမကို မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ အတွက် ခင်ဗျားကို စောက်ရမ်း ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ….။ “တစ်အိမ်တည်းမှာနေတဲ့ အပေါ်ထပ်နဲ့အောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းက ခင်ဗျားတို့ကြားနေကျ ဇာတ်လမ်းတွေလိုပဲ အိုးချင်းထား အိုးချင်ထိကြကုန်တာပေါ့….။
မမနဲ့ကျနော့်ရဲ့ ရင်းနှီးမှုက တစထက်တစ ငြိတွယ်ရစ်ပတ်လာပုံက မြန်ဆန်လွန်းတယ်…ကျနော့်နဲ့ကျနော့် မိသားစုအကြောင်းကို ပြောပြထားသလို မမရဲ့မိသားစုရယ်၊မမမှာ လူကြီးတွေစေ့စပ်ပေးထားတဲ့ “ကိုသန့်စင်”ဆိုတဲ့ လူရယ်ရှိနေတာ သိလိုက်ရတယ်…။ ဒါပေမယ့် မမက လက်ထပ်ပြီးသားမှာမဟုတ်တာ…မမကိုချစ်ခွင့် ကျနော်မှာလည်းရှိတယ်…။ “ရသရေ…ရသ” မင်းကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင် ရုံတင်ပြီကွ…။ ဟုတ်လား…မမလိုက်ပြမယ်ပြောထားတယ်လေ…အဲ့တာ ဒီည ညပွဲလိုက်ပြပါ။ အေးပါကွာ…မမသင်တန်းက စောပြန်ခဲ့မယ်..မင်းအဆင်သင့်ပြင်ထားး ညရောက်တော့…ခရမ်းနုရောင်ပါတိတ်ဝမ်းဆက်လေးနဲ့အရမ်းလှနေတဲ့ မမနဲ့ယှဉ်တွဲကာ သာကေတမြရတနာ ရုပ်ရှင်ရုံထဲသို့ ည ၉နာရီပွဲကြည့်ရန် ရောက်သွားကြတယ်…။ ရုံထဲရောက်တော့ အဲကွန်းအေးဒဏ်ကြောင့် လက်ပြတ်လေးဝတ်လာမိတဲ့ မမက ချမ်းလို့ ထင်ပါရဲ့ ကျနော်နဲ့ပူးကပ်ထိုင်ပြီးးလက်ဖျားလေးတွေပါ အေးလာတယ်…။ မမ ချမ်းနေမှန်သိတော့ သူမလက်ဖျားလေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး “အရမ်းချမ်းနေလား မမ” “အင်းးနည်းနည်းချမ်းတယ်” ဆိုပြီး မဝံ့မရဲပြန်ဖြေတဲ့မမစကားအဆုံးမှာ …..မမပခုံးလေးကို လှမ်းဖက်ပြီး ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲယူကာ ရုပ်ရှင်ထဲ စိတ်ပြန်နှစ်လိုက်တယ်….။
သို့ပေမယ့်…ကျနော့်အာရုံတွေ ရုပ်ရှင်ထဲနှစ်မရတော့ပဲ ကျနော့်ခါးကို ပြန်သိုင်းဖက်ပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ မမအထိတွေ့တွေကို နစ်မျောနေပါပြီ…။ သက်ပြင်းကို အခါခါချပြီး မဖြစ်သင့်မှန်းသိပေမယ့် အမည်မဲ့နတ်ဆိုးတစ်ကောင်ရဲ့ တွန်းအားကြောင့် မမနှုတ်ခမ်းအစုံကို ငုံ့ပြီး စုပ်ယူလိုက်ချိန်မှာတော့…..။ “ရသ…ဟင့်အင်းတဲ့” မမရဲ့ အငြင်းဝါဒကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး မမနှုတ်ခမ်းအစုံကို စုပ်ယူရင်း ကျနော်နဲ့မမ အချစ်နယ်ပယ်တစ်ခုဆီသို့ သက်ဆင်းသွားရတယ်…။ တုံ့ပြန်နမ်းလာတဲ့ မမနှုတ်ခမ်းတွေရယ် ခပ်တင်းတင်းဖက်လာတဲ့ မမလက်အစုံရယ်ကြောင့် ကျနော့်အချစ်ပိုက်ကွန်ကို အုပ်မိုးကာ ဖမ်းယူလိုက်ချိန်မှာတော့….။ “ဟင်းးအင်း..အင်း…”ဆိုတဲ့ ညည်းညူ သံလေးတွေနဲ့အတူ အချစ်နွံထဲသို့သက်ဆင်းကြရင်း….မမရဲ့ရင်သားထွားထွားလေးတွေကို လက်အစုံပို့ကာ ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ရင်း…လည်တိုင်ကျော့ကျော့လေးဆီသို့ အနမ်းရွေ့ကာ စုပ်ယူနမ်းရှိုက်လိုက်တယ်…..။ “အိုး တော်ပါတော့…ရသရယ်” မမ ဘယ်လိုမှ မနေတတ်တော့ဘူး”တဲ့….။ “ကျနော် တို့ အိမ်ပြန်ကြရအောင်..မမ” “ဟင်..ရုပ်ရှင်မှ မပြီးသေးတာကွ..မင်းပဲကြိုက်တယ်ဆိုလို့ လိုက်ပြတာလေ…”။ ဟင့်အင်း ခု ရုပ်ရှင်ကို စိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဗျာလို့..မမနဖူးလေးကို နမ်းရင်း ပြောလိုက်တော့….”သွားလူဆိုးလေးတဲ့” တက္ကစီငှါးပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဖွားနဲ့ အန်တီလေးက မအိပ်သေးပဲ တံခါးထဖွင့်ပေးတယ်…။
အပေါ် ထပ်တက်ကာ အဝတ်စားလဲပြီး မမနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံထဲကအကြောင်းကို ပြန်စဉ်းစားရင်း အောက်က ညီတော်မောင် ခေါင်းထောင်လာတော့…ဖြေးဖြေးလေးပွတ်သပ်ပေးကာ…ရှေ့တိုးနောက်ငင် လုပ်ပေးလိုက်တယ်….။ “အင်းး…ဟင်း”အံလေးကြိတ်ကာ လက်တွေကို ညီတော်မောင်ဆီ ပွတ်သပ်ပေးရင်း….။ “ဖျပ်…ဖျပ်…” ဟာ မီးပျက်သွားပြီ။ မမရေ ဖယောင်းတိုင် ဝယ်ပြီးသားရှိရဲ့လား?ကျနော့်မှာ အပိုရှိတယ် မမ..ယူမလားဗျ။ အေး အဲ့တာဆိုရင်..ယူခဲ့ပေးအုံးကွာ..မမအောက်ထပ်မှာ မှောင်မဲနေပြီ…။ ဖယောင်းတိုင်ယူ အောက်ထပ်ဆင်းကာ မမခန်းဆီသို့ ဝင်လိုက်တယ်….။မီးခြစ် ခြစ်ကာ ဖယောင်းတိုင်းကို မီးညှိလိုက်ချိန်မှာတော့ အဝတ်စားလဲရင်း မီးပျက်သွားတုန်း ရင်လျားလေးနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ မမကို တွေ့လိုက်ချိန်မှာတော့…….။ ဘယ်လိုမှ ထိန်းသိမ်းမရတော့တဲ့ အချစ်ရေလျင်တွေကို မမပေါ်ကို စီးဆင်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်… မတ်တပ်လေးရပ်နေတဲ့ မမကိုယ်လေးကို နံရံဆီတွဲ မှီပီး နှုတ်ခမ်းအစုံကို နမ်းယူစုပ်ငင်လိုက်တယ်…။
“ရသရယ်…ဆိုတဲ့ ညည်းသံလေးကို မကြားချင်ယောင်ဆောင်ကာ နောက်တစ်တစ်ဆင့်တက် ဖို့ မမရင်သားအပေါ်ကို အုပ်စိုးထားတဲ့ ထမီစလေးကို ဖြည်ချလိုက်ချိန်မှာတော့……..။ ဖယောင်းတိုင် မီးရောင်ကြောင့် ဝင်းဝါစိုပြေပြီး မကြီးမသေးလွန်တဲ့ ရွှေရင်နှစ်မွှာကို အခိုက်တန့် ငေးကြည့်ရင်း…… ကျနော့် ခေါင်းလေးငုံကာ နှုတ်ခမ်းအစုံကို ချိုသီးခေါင်းလေးတွေဆီ စို့ယူနမ်းရှိုက်လိုက်တော့တယ်….။ (ပြွတ်စ့်….စ့်စ်စ့်..ပြွတ်စ့်) တဖက်ကို စို့ယူနေချိန် တဖက်ကို ပွတ်နယ်ပေးလိုက်တော့ ကျနော့်ဆံပက်တွေကို ထိုးဖွကာ တအင်းအင်းညည်းညူသံတွေက အခန်းပြင်ဘက်ကို လျှံထွက်မှာ စိုးရွံ့စရာ…။ ချစ်တလင်း ခင်းဖို့ အတွေ့အကြုံကို သဘာဝတရားကြီးက သင်ပေးလိုက်ရုံမက ဟိုကားတွေရဲ့ အတွေ့ကြုံကြောင့် နှုတ်ခမ်းတွေကို ရွှေရင်အစုံကိုကျောခိုင်းကာ ဗိုက်သားရှပ်ရှပ်လေးတွေကို နမ်းရင်း ဒူးထောက်ကာ မမဆီးခုံမွှေးညင်းလေးတွေကတဆင့် ပိပိကွဲကြောင်းလေးကို နှာခေါင်းချွန်လေးနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ပေးလိုက်တော့…….။မမ ဒူးမခိုင်တော့ဘူး ထင်ပါရဲ့….အိပ်ယာပေါ်သွားကြရအောင်ကွာတဲ့…။
မမကိုယ်လေးကို ပွေ့ယူပြီး အိပ်ယာပေါ်တင်ကာ မမပေါင်ကြားထဲ တိုးဝှေးရင်း ရန်စနေတဲ့ အစိလေးကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ဖိကိုက်ပြီး ခပ်ဆတ်ဆတ်လေးခါပေးလိုက်တော့……အိုး..အချစ်ရာ,.မမရူးလိမ့်မယ်တဲ့…။ ခါးလေးခွေပြီး ကျနော့်ပါးပြင်ကို ပွတ်သပ်ရင်း ဘုန်းနိမ့်မှာ မကြောက်ဘူးလားတဲ့….။ဟင့်အင်းးအဲ့အယူတွေ ကျနော့်မှာမရှိပါဘူး မမ…မမကို ချစ်တာ ရှုံးခြင်းမြတ်ခြင်း ဘုန်းနိမ့်ခြင်းစတာတွေ ဘာမှမရှိပါဘူးဗျာ..။ “မောင်ရယ် ချစ်တတ်လိုက်တာကွာ”လို့ တီတာလေးပြောပြီး သူမပေါင်လေးတွေကို ဟပေးလာတော့ ကျနော်လည်း မရဲ့ပိလေးကို အသာလေးဖြဲယူကာ အတွင်းသားရဲရဲလေးတွေကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်းလေး လျက်ပေးလိုက်တယ်။မမပိပိက ဝတ်ရည်လေးတွေ လျှံကျလာတော့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ခွာလိုက်ပြီး ညာလက်ခလယ်လေးနဲ့ အကွဲကြောင်းလေးကို ထိုးမြုပ်လိုက်တော့ တင်းခံနေတဲ့ အရာတစ်ခုကြောင့်…..မမမျက်နှာလေးကို မြတ်တနိုးကြည့်ရင်း မမရဲ့အပျိုရည်လေးကို ယူငင်ဖို့ ကျနော် ချီတုံချတုံဖစ်သွားရတယ်…။ မမကတော့ နားလည်သည့်အလား မမရဲ့ အပျိုရည်ကို မောင့်ကိုပဲ ပေးပါရစေလို့ တိုးလေးကပ်ပြောလာတော့…အတွေ့ကို မရှောင်နိုင်တော့ပဲ မမပိပိလေးနဲ့မျက်နှာပြင်ကို နောက်တစ်ကြိမ်ဆင်းသက်ခွင့်ပေးလိုက်တော့တယ်…..။
အရည်စတွေက နှာခေါင်းနဲ့ နှုတ်ခမ်းကို ထိပေလာတော့ ညှီတီတီအနံ့လေးက စိတ်ရိုင်းတွေကို ပို၍နှိုးဆော်လိုက်သလိုလို…။ ထောင်မတ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ညီတော်မောင်က မမရဲ့ ညီမလေးကို ငိုယိုပြီးထိတွေ့ပေးဖို့ ခွင့်ပန်လာတော့ မမပေါင်ကြားထဲက ထွက်ကာ ဒူးထောင်ပြီး ပုဆိုးစကို ဖြည်ချလိုက်တယ်…။ခြောက်လမကျော်လောက်မတ်ကာ ထောင်မတ်နေတဲ့ လီးက ကျနော့်အတွက်တော့ ရိုးနေပေမယ့် မမအတွက်တော့ ရင်ဖိုစရာ…။ “ထွားလိုက်တာ မောင်ရာ”တဲ့ ဟုတ်ပါရဲ့ ကျနော့်ညီတော်မောင်က တကယ့်ကို ထွားကြိုင်းမာတင်းနေတာ သဘာဝကြီးက ပေးထားတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုပါပဲ…..။ မမပေါ်ကို အုပ်မိုးကာ ကျနော့်လီးကို မမရဲ့ ပိပိအဝလေးကို တေ့ပေးပြီး ဖြေးညှင်းစွာ ဖိချလိုက်တယ်…အထိတွေ့က အာခေါင်တွေခြောက်သွားပြီး မမပိထဲက အမှေးပါးလေးခံနေတဲ့အတွက် နာမှာစိုးရိမ်တာကြောင့်..သွင်းနေတဲ့လက်စကို ရပ်ထားရင်း မမလည်တိုင်လေးကို မနာအောင်ကိုက်ပေးလိုက်တယ်…။
(စာဖတ်သူတွေ မှတ်ထားကြဗျ…ကောင်မလေးတွေရဲ့လည်တိုင်ကို ကိုက်ပေးရင် ထွန့်ထွန့်လူးသွားတတ်ကြတယ်..ခြွင်းချက်တော့ရှိပေမယ့် များသောအားဖြင့် အဲ့လည်တိုင်လေးကိုဖွပြီးကိုက်ပေးရင် ဟော့သွားတတ်ကြတယ်ဗျ) မမ လူးလွန့်နေတာ မြင်တော့ သွင်းလက်စ လီးကို အသာလေးပြန်ထုတ်ကာ အားနဲ့ ဖိချပေးလိုက်တယ်…..။ “အင့်…အားး” လီးကအမှေးပါးလေးကို ကျော်ဖြတ်ပြီးးသုံးလက်မလောက်ဝင်သွားတော့ ရှုံ့မဲ့နေတဲ့မျက်နှာလေးကို နမ်းရင်း..တဆုံးထိဖိချလိုက်တယ်……။ “အိုး…မမအချစ်ရယ်…” မမရဲ့ အသံလေးကိုမကြားတော့ပဲ ကျနော့်လီးကို ဖြေးညင်းစွာ သွင်းထုတ်လုပ်ပေးရင်း မမရဲ့ ရင်သားလေးတွေကို ဆုပ်နယ်ရင်း…ကာမရေပြင်မှာ ကူးခပ်နေလိုက်တာ….., “အချစ်ရေ…အသဲ..မမ့အသဲရေ” မမရှူး ထွက်ချင်သလိုကြီးပဲကွာ…အားအား..ဟင်းးဟင့်အင်းမထိန်းနိုင်တော့ဘူးးမမထွက်ကျကုန်ပြီဆို ကာ ဗို့အားပြင်းတဲ့ လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုမမကိုယ်ထဲစီးဝင်သွားသလို ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် ဖြစ်သွားတော့တယ်…(ဒါမိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြီးမြောက်ခြင်းလား?) မောဟိုက်နေတဲ့ မမက ခနရပ်ပေးကွာ…အားး,အ့..အချစ်ရာ……။
မမရဲ့ တားမြစ်သံတွေကို ဂရုမစိုက်မိပဲ ဆောင့်ချက်တွေကို သွက်ပေးလိုက်တော့ ကျနော့်လီးတစ်ချောင်လုံးတင်းမာလာကာ အကြောတွေ ထောင်တတ်ပြီး အရည်တွေ ပန်းထွက်မယ်ဆိုတာ သိလိုက်တော့…စိတ်ကိုလျှော့ချပြီး…… “အ့…အ့..အား”အိုး..မမရာ ကျနော် သုတ်ရည်တွေကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မမရဲ့ ပိပိလေးထဲ ပန်းထည့်ပေးလိုက်တော့ မမတစ်ယောက် လူးလွန့်ကော့ပျံကာ.ဒုတိယ အကြိမ် ပြီးဆုံးချင်းသို့……။ တစ်ညလုံး ချစ်ရည်လူးရင် မနက်၎နာရီလောက်အပေါ်ထပ် အခန်းကို ပြန်တက်လိုက်တယ်…မမလည်းနွမ်းလျတဲ့လေသံလေးနဲ့ မောင့်ကိုမခွဲချင်ဘူးကွာတဲ့…သေချာတာတော့ အပေါ်ထပ်ကိုပြန်တက်လာတဲ့ ကျနော့်ဒူးတွေကလည်း ယိုင်နဲ့နဲ့ရယ်ပါ…။ နောက်ရက်တွေကျ သင်တန်းသားလေးကျနော်နဲ့ သင်တန်းဆရာမလေးမမက အများသူငှါရှေ့မှာတော့ တကယ့်ကို ဆရာနဲ့တပည့်တွေလိုပါပဲ….။ ဒါပေမယ့်..အဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့…။ မမနဲ့အတူ ရေချိုးမယ်ကွာ… အာ ရှက်စရာကြီး မောင်ရာ….မရဘူး ငြင်းနေပေမယ့် စွေ့ခနဲ့ပွေ့ချီကာ ရေချိုးခန်းထဲ မလာတဲ့ ကျနော့်ကိုတော့ မမလုံးဝတားခွင့်မသာခဲ့တာပါ…။
ရေချိုးရင် မမတစ်ကိုယ်လုံးကို ဆပ်ပြာနဲ့ပွတ်တိုက်ပေးခြင်း..မမရဲပိပိလေးကို လက်လေးနဲ့ ဆေးကြောပေးခြင်း မမကို ရေချိုးခန်းနံရံမှာ မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းပြီး မတ်တပ်လိုးခြင်း…အိုး..လိုးနည်းအစုံ အချစ်ပေါင်းစုံနဲ့ ချစ်လိုက်ကြတာနေ့တွေ ညတွေတောင် မေ့မတတ်ပါပဲဗျာ။ တခါတလေ အဖွားနဲ့အန်တီလေးမရှိခိုက် ကျနော့်ကို အိပ်ယာမနှိုးပဲ ကျနော့်ပေါင်ကြားက ငပဲကိုလွေနေတဲ့ မမရဲ့ပြုမူလေးတွေက သဲယားချင်စရာ…။ ဒီလိုနဲ့ ရာသီစက်ဝန်းကြီးက တစ်ပတ်ပြန်လည်လာပြန်ပြီ….။ ကျနော်နဲ့မမကြားမှာ ရှိနှင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကိုသန့်စင် တစ်ယောက် စင်္ကာပူက ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့….။ မမဒီအိမ်ကနေ ပြောင်းရတော့မယ်..မမကို ကိုသန့်စင်က သူဝယ်ထားတဲ့တိုက်ခန်းမှာ ရွှေ့နေပေးဖို့ ပြောလာတယ်..ပြီးတော့ လက်ထပ်ပြီးရင်လည်းနေရမှာတဲ့…။ မမပြောတဲ့ စကားတွေကို မျက်ရည်အဝိုင်းသားနဲ့နားထောင်နေတဲ့ကျနော့်ကို ကြည့်ရင်း…”မောင်ရာ”ဟုဆိုကာ ကျနော့်ခါးကို သိုင်းဖက်လာတယ်။
“မမကို ခိုးပြေးမယ်ကွာ” မဖြစ်ဘူး…မောင်, မမလေ လူကြီးတွေနဲ့ ကိုသန့်စင်ကို ပေးထားတဲ့ ကတိကို တည်စေချင်တယ်…။ “ဗျာ…ပြောထွက်လိုက်တာဗျာ” အဲ့ကတိတွေကြောင့် ကျနော်တစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာ မမကြည့်ရက်သလား? မမ မျက်ဝန်းက မျက်ရည်တွေ ကျလာပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုတော့ အခိုင်အမာ ချထားတဲ့ပုံပါပဲ။ မမတို့ ပြန်ကြရအောင်…ရသ အပြန်လမ်းက နှစ်ယောက်စလုံးစကားသံတွေ ဆွံ့အနေကြပေမယ့် တစ်ယောက်လက်ကိုတော့ တစ်ယောက်တွဲထားတုန်းပါပဲ….။ နောက်ရက်တွေက စပြီး မမဘက်က သိသိသာသာကြီးကိုပြောင်းလဲသွားကာ ကျနော့်ကို လုံးဝကို အတွေ့မခံတော့တာပါ…စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့တဲ့ အဆုံး.အရက်ဆိုင်မှာ အရက်သောက်ပြီး အမူးလွန်ကာ…အဲ့နေ့ညက မမအခန်းရှေ့မှာ သွားပြီးပေါက်ကွဲလိုက်တယ်….။နောက်နေ့အရောက် မမလည်းရှက်ပြီး ကျနော်အမူးပြေတော့ အိမ်ပြောင်းသွားပြီတဲ့ဗျာ…..။
အဲ့ရက်ကနေစပြီး ကျနော်နဲ့မမဆက်သွယ်ပြတ်သွားလိုက်တာ…သင်တန်းကနေတစ်ဆင့် မမဖုန်းကိုရတော့…နောက်ဆုံးတွေ့ခွင့်လေးပေးပါဆိုပြီး တောင်းဆိုလိုက်တယ်…….။ အတိတ်အကြောင်းကို ပြန်တွေးရင်းမျက်ရည်စတွေကို ဖယ်ရှားရင်း ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း တစ်ဖက်ခြမ်းရှိကားဂိတ်ကို ကူးဖို့ ဖြတ်လိုက်စဉ်မှာတော့………။ “ဟေ့ ကောင်လေး…ညီလေးရေ ရှေ့မှာကား…မကူးနဲ့ရပ်နေ……။ ဟာ…..သူမကြားတာလား? “ကျွီ…..ဒုန်းးးး” ကျနော် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး လေထဲမှာ အခိုက်အတန့်တော့ လွှင့်ပါသွားပါတော့တယ်…အဲ့နောက်မှာတော့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး အမှောင်ထု ဖုံးသွားပြီး…ကျနော့် နှုတ်ခမ်းဝဆီမှ အမည်နာမတစ်ခုကို တမ်းတလိုက်မိတယ်….။ “မမရယ်” ဟာ…ဟိုမှာကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ကားတိုက်သွားပြီဟေ့…။လူတွေဝိုင်းအုံပြီး ကားတိုက်ခံရတဲ့ ကောင်လေးနား ရောက်လာ ချိန်မှာတော့…….။ သွေးစသွေးနတွေနဲ့ အသက်မဲ့သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့……..။ ပြီးပါပြီ
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မုနျး…(မမသေ့၍)